सुर्केनो फुकाउने र गाँठो चुँडाल्ने खुबी !
हिजोसम्म अरूले गर्न दिएनन् भन्ने छुट थियो, आज त्यो छुट कत्ति पनि छैन । बिचौलिया, डन, तस्कर, माफिया, कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी, जग्गा दलाल र चाकरीबाजबाट जोगिन सकेनौ भने, सावधान ! तिमी पनि नारायणहरि हुन धेरैबेर लाग्दैन । आजैदेखि माला, खादा र बाजामा नभुल किनभने तिमी देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेपछि पत्रिका, टिभी, रेडियो, सामाजिक सञ्जालले तिमी र तिमीले गरेका काममाथि नै फोकस गर्नेछन् ! तिमी राजनेतामा स्थापित र अमर हुनेछौ ! जन-आस्था साप्ताहिकबाट